Shiinaha Silicone Straps warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Qalabka silikoonku ma aha oo kaliya jilicsanaan iyo waara, sidoo kale waa mid xoog badan oo ku wanaagsan ductility iyo malleability. Silsilado badan oo silikoon ah ayaa si aad ah loogu adeegsadaa nolosheena, sida taleefanka silikonka gadaashiisa, xargaha silikoon, kabaha silikoon, silsiladaha silsiladda iyo wixii la mid ah. Xargaha silikoonku waa xoog iyo dhuuban ...
Qalabka silikoonku ma aha oo kaliya jilicsanaan iyo waara, sidoo kale waa mid xoog badan oo ku wanaagsan ductility iyo malleability. Silsilado badan oo silikoon ah ayaa si aad ah loogu adeegsadaa nolosheena, sida taleefanka silikonka gadaashiisa, xargaha silikoon, kabaha silikoon, silsiladaha silsiladda iyo wixii la mid ah. Xarkaha silikoonku waa xoog badan yihiin oo dhuuban yihiin, waxay si adag u hayaan alaabta oo leh awoodda laastikada. Calaamadaha waa la daabici karaa, la qarin karaa ama midab la qallajin karaa oo lagu buuxiyay jidhyada silikoon, sidoo kale waxaa lagu samayn karaa summadaha kale ee silikoon ama PVC ka dibna ku soo ururi xargaha silikoon si loo muujiyo fikradahaaga iyo fikradahaaga. Xarkaha silikooniga ah ayaa xitaa laga sameeyaa walxo dhalaalaya ama nalal dhalaalaya si ay u noqdaan kuwo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Isku -darka ayaa ka dhigaya suumanka silikoonku inuu noqdo mid shaqeynaya oo loo xulan karo dallacsiinta, ganacsiga, hadiyadaha, xafladaha, isboortiga, dugsiyada iyo ujeedo kale.
Naqshadaha iyo cabbirka: Lacag caaryar oo lacag la'aan ah ayaa loogu talagalay naqshadeena jira, naqshado la habeeyay
Logos: Logos -ka waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa ama waa la dejin karaa iyadoo midab la buuxiyey
Hore: Silsiladaha Cable Silicone
Xiga: Koobabka Laabista Silikoon
Miisaanka Waraaqda oo ay ku jirto Coin Embed